Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBarbados Breaking » UKumkanikazi wathatha indawo kaMongameli wokuqala omtsha
Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-LONDON, E-ENGLAND-MATSHI 23: UDame Sandra Mason, irhuluneli jikelele yaseBarbados, emva kokuba enziwe i-Dame Grand Cross ye-Order yaseSt Michael kunye ne-St George posts emva kokufumana ngexesha lomsitho woTyalo-mali eBuckingham Palace ngo-Matshi 23, 2018 eLondon. , eNgilani. (Ifoto nguJohn Stillwell-WPA Pool/Getty Images)
USandra Mason yirhuluneli ekhoyo ngoku yaseBarbados, isikhundla awaqeshwa kuso ngo-2017 kwaye usebenze phantse iminyaka emithathu. Uza kuqeshwa njengoMongameli wokuqala waseBarbados emva kokuba ephehlelele iphulo ngo-2020 lokwenza iBarbados ibe yiRiphabhlikhi, echaza ukuba "amaBarbadians afuna iNtloko yeLizwe yaseBarbados."
Ipalamente yaseBarbados ivotele kwinyanga ephelileyo ukuba ithathe indawo kaKumkanikazi uElizabeth II kunye neRhuluneli ekhoyo ngoku uSandra Mason njengomongameli wayo wokuqala, evumela ilizwe ukuba lidlule kwimbali yalo njengekoloniyali endala yoBukhosi baseBritane.
UMason uza kufungiswa njengomongameli wokuqala we Barbados ezinzulwini zobusuku namhlanje, isusa inkosi yaseBritane njengentloko yelizwe emva kweenkulungwane ezi-4.
Inkosi ibe yintloko yelizwe phantse iminyaka engama-400, nangona esi siqithi safumana inkululeko kwi-UK ngo-1966. Barbados Iriphabliki, ibhengeza ukuba "amaBarbadians afuna intloko yelizwe laseBarbadian."
IBarbados yiparadesi yezokhenketho kunye nenkcubeko, kwaye olu tshintsho luya kuvela ngokuqinisekileyo kwinyathelo elibalulekileyo lembali kushishino lokuhamba kunye nokhenketho.
“Ekubeni safumana inkululeko kwisiqingatha senkulungwane eyadlulayo, ilizwe lethu alinakuthandabuza ngamandla alo okuzilawula. Lifikile ixesha lokuba siyishiye ngokupheleleyo indlela yethu yobukoloniyali, utshilo uMason ngoSeptemba, ekhusela eli phulo.
The INkosana yaseWales, noyindlalifa kaKumkanikazi, ugaleleke kwesi siqithi kumsitho wokufungiswa kwikomkhulu iBridgetown National Heroes Square.
UKumkanikazi uya kusiyeka ngokusemthethweni isikhundla sakhe ezinzulwini zobusuku, nge-30 kaNovemba ephawula isikhumbuzo seminyaka engama-55 Barbados' inkululeko, apho iNkosana uCharles iya kwamkela ngokusesikweni kwixesha elitsha.
Ngaphandle kwesigqibo sesiqithi sokugxotha uKumkanikazi, iNkosana yaseWales ivakalise ithemba lokuba i-UK kunye neBarbados ziyakugcina ubudlelwane obuluqilima, igxininisa "unxibelelwano oluninzi" phakathi kwala mazwe mabini.
IBarbados lilizwe lamva nje leCaribbean ukuba libe yiriphabliki, lijoyine iDominica, iGuyana, kunye neTrinidad neTobago. Ngelixa iJamaica ingakhange ihambe ngokusesikweni ukumisela umongameli, iNkulumbuso u-Andrew Holness uthe uzimisele ukuthatha indawo kaKumkanikazi njengentloko yelizwe.
شات العراق uthi:
Novemba 30, 2021 kwi-01: 49